Umhla My Pet » 3 Izizathu ukuba Thabatha Puppy lwakho Usuku lokuqala
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, umhlobo wandinika igama nenombolo wathi ukuba umhlobo wakhe esakhulelwe ukuba umntu afowune abuze phandle. Ndandicinga ukuba yokudlala yangaphandle kuba umhla fun kuqala. Sasidla kuthatha iqatha, nentsuba yewayini, ingubo uze ube ngorhatya yehlobo omhle kunye. Ukuba wayenyanisile yonke loo.
Lo mhla oyimfama kwenzeka ungqamane nam injana ehleli umntu Inomtsalane 10 ngeveki Retriever endala Golden. Ndandicinga ukuba oku kuza kongeza kuphela kumhla ndayihlisa naye ukuze. kunokuba, lobuhlobo akufiki iphela sicwangcise. Nazi izizathu ezithathu ukuba ukuthatha injana yakho ngomhla wokuqala:
1. Injana uzenzele eninzi ingqalelo leyo lomncedis incoko yethu
Zange Sikwazile ukufumana ngokwenene omnye komnye. njana, okanye izilwanyana ngokubanzi, kukho zokuqalisa kakhulu incoko, kodwa kuthetha ukuba wonke umntu wayefuna ukubuza endala njani yena.
2.Ekubeni kwakufuneka unenja kungekhona inja omdala, ufune Zilumkele
Oku kwakuthetha ukuba aba iimpelesi ngaphezulu nja ngaphezu isibini ngomhla kunye neqabane wesithathu SSL kunye.
3.Puppy Poo ayifani ncam into aphrodisiac
Ukuba inja omdala, leti nepoti kuya kwenzeka ngaphantsi rhoqo yaye unolawulo kancinci nini yaye phi ezi kwenzeka.
Ekupheleni ebusuku, Andizange ngokwenene uzive ingathi ndi kakhulu ithuba ukuze ukwazi umhla wam. Ethwele inja (kuba akazange wafunda ukuhamba ngomnxeba kodwa) kucoca emva kwakhe ukuba ukwabelana ubudala indlela wayekunye amakhulu yabasemzini abanomdla, Ndaziva ngathi mna ebesebenza ubusuku bonke kunokuba ukwazi intombi intle. Kwakungekho umhla wesibini, kodwa wafunda isifundo esibalulekileyo. Shiya injana ekhaya kuba ngomhla wokuqala.